Wax Ka Ogaaw: Dharka Ugu Qaalisnaa Ebid Oo Ay Xidigaha Bollywood-ka Soo Xirteen Filimadana Ku Jileen Qaybta 3-aad - Hablaha Media Network
Wax Ka Ogaaw: Dharka Ugu Qaalisnaa Ebid Oo Ay Xidigaha Bollywood-ka Soo Xirteen Filimadana Ku Jileen Qaybta 3-aad
HMN:- Kusoo dhawaada qaybta sedexaad maqaalkeena aan kaga hadleenay jilaayaasha Bollywood-ka ee dharka ugu qaalisan ebid soo xirteen marka ay filimada jilayaan iyo qiimaha ay ku fadhiyaan labiskaas:
Aishwarya Rai Bachchan (Jodha Akbar): sida xaqiiqada ah boqorad soo jiidasho leh ayaa loo ekeysiiyay Aishwarya Rai marka ay filimka Jodha Akbar jileesay.
Balse labiska ay wadato xidigtaan ee dhaqanka boqortooyada Hinduuga ka turjumaayay wuxuu ku fadhiyay qiimi ahaan 2 Lakh ($3,030).
Shah Rukh Khan (Ra.One): Bollywood King Khan si uu doorkiisa Super Hero kaga run sheego ee filimka Ra.One qarash xoog leh ayuu galay weliba labiskiisa oo qaali xad dhaaf ahaa.
Sida rasmiga ah SRK labiska Super Hero ee uu wato filimka Ra.One qiimo ahaan wuxuu ku fadhiyay xiligaas 4.50 Crore ($681,818) waana labiskii ugu qaalisnaa ee ebid jilaa loo sameeyo xiligaan casriga ah!
Vivek Oberoi (Prince): Xidigaan wuxuu wataa inta badan filimka Prince labis qaali ah oo mootooyinka lagu qaato kaasi oo loo yaqaan (Biker Suit).
Labiskaas qiimo ahaan wuxuu ku fadhiyay xiligaas 30,000 Rupees waxaana loo sameeyay 6-joog oo kala duwan taasi oo ka dhigan in qarashka guud ee labiskaan ku baxay uu yahay 180,000 Rupees ama 1.80 Lakh oo u dhiganto ($2,727).